Adora & etc.: ကျောင်းတော်ကချစ်သူတွေ
Posted by Adora etc. at 02:17
Unknown4February 2015 at 02:39
Woah, nice story. I thought the person wasaguy :D
Adora etc.4February 2015 at 23:35
မြတ်ကြည်ရေ. လာအားပေးတာ ကျေးဇူးနော်။ သူ့ကို မိန်းကလေးမှန်းမသိစေချင်လို့ အစမှာတမင် ဖျောက်ပြီးရေးဖြစ်တာ။ မိန်းကလေးကျောင်းတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့အမှတ်တရတွေပါပဲ။
ဇွန်မိုးစက်5February 2015 at 02:38
မူလတန်းကနေ အထက်တန်းထိ အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကို စေ့စေ့ငုငု ပြန်ရေးပြသွားတဲ့ Adora ကို ချီးကျူးတယ်။ မဇွန်တို့ရှေ့နှစ်က အမကြီးတွေလည်း နိုင်ငံတော်အလံကို အလေးပု လို့ ပြောင်ပြီး ဆိုခဲ့ကြတယ်။ တော်တော်ကြာ Adora က ကိုယ့်ထက်တစ်တန်းပိုကြီးတဲ့ စီနီယာဖြစ်နေဦးမယ်။ :D
ဇွန်လည်း ငယ်ငယ်က ကြောက်တတ်တော့ လာစကားပြောတဲ့အမကြီးတွေ မတွေ့အောင် အိမ်သာထဲသွားပုန်းတာတို့ဘာတို့ လုပ်ခဲ့သေးတယ်။ နှင်းဆီပန်းဆိုလို့ ၉တန်းတုန်းက အနီရဲရဲနှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်ရဖူးတာကို သွားသတိရတယ်။ ကိုယ်ကအံ့သြနေချိန်မှာ ဘေးကသူငယ်ချင်းက ငိုတယ်။ ခုချိန်ထိ ပန်းပေးသူ ဘယ်သူလဲဆိုတာ သေချာ မသိခဲ့ဘူး။ အင်း... အမှတ်တရတွေပေါ့...နော။ ;)
ဖတ်နေရင်းနဲ့ Adora နဲ့ ဇွန်တို့ နှစ်သိပ်မကွာဘူးလို့ ထင်တယ်။ ကျောင်းမှာ တကယ်တော့ waist coat ၀တ်လို့မရဘူးနော်။ အမတို့နှစ်မှာ ၀တ်တဲ့သူတွေ သိပ်မရှိပေမယ့် ကိုယ့်ရှေ့နှစ်က စီနီယာအမကြီးတွေ ၀တ်လေ့ရှိတာကို သတိထားမိတယ်။
ကြာသွားပေမယ့် အမှတ်တရတွေကို သေသေချာချာလေး ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်လို့။ :)
Adora etc.5February 2015 at 20:02
မဇွန်ရေ ဟုတ်တယ်နော်။ တို့တွေ အတန်းသိပ်ကွာမယ်မထင်ဘူး။ အတန်းတော့ဒီမှာ မပြောတော့ဘူးနော်။ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေချည်းဆိုတော့ ရှက်လို့။ ဟီး
ကျောင်းမှာ waist coat ၀တ်လို့မရတာ ဟုတ်တယ်။Adora တို့ တော့ခိုးဝတ် တာပဲ။ ပြောရရင် ကျောင်းတုန်းကတော်တော်ဆိုးတာ။ ဖိနပ်အဖြူပဲစီးရမယ်လို့ ၉တန်းလောက်မှာစည်းကမ်းထွက်လာလို့ ကျောင်းအဝင် ယင်းမာဖိနပ်အဖြူစီးဝင်ပြီး ဆရာမတွေလဲကျော်ရော လွယ်အိတ်ထဲက ကျောင်းစိမ်းနဲ့အရောင်ဆင်တူ ပုံတော်ဖိနပ်ချစီးပြီး ထွက်ပြေးတာတို့ ဘာတို့လဲလုပ်သေးတာ။ ဆရာမတွေ ပြေးမလိုက်နိုင်မှန်းသိလို့လေ။ အထက်တန်း ကျောင်းသူဘဝမှာ အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံသုံးပြီး အတန်းလစ်တာတွေလဲအများကြီး။ စာအရမ်းမေးတဲ့ ဆရာမကို စာမမေးအောင် လုပ်တဲ့နည်းတွေလဲရှိသေးတယ်။းD
ဇွန်မိုးစက်6February 2015 at 07:25
ယင်းမာဖိနပ်အဖြူစီးရတယ်ဆိုတော့ Adora က မဇွန့်ထက်ငယ်တာ သေချာသွားပြီ။ :P
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ကိုယ့် လသာ၂က ညီမအချင်းချင်း ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ခုလို တွေ့ဆုံခင်မင်ခွင့်ရပြီး အမှတ်တရလေးတွေ ဖလှယ်ခွင့်ရတာ ၀မ်းသာမိတယ်။ :)
ဆုမြတ်မိုး 26 February 2015 at 16:39
ဆုမြတ်မိုး 26 February 2015 at 16:41
ဒိုရာ နဲ့ အဒိုရာနဲ့ မတူဝူးထင်တယ်နော်.. ။ တူလားဟင် ။ မှားရေးမိတာ...:P ကျောင်းတော်ကချစ်သူတွေကိုအားပေးသွားပါတယ်း)
Adora etc. 27 February 2015 at 01:16
တူဘူး ဆုမြတ်။ ဟီး